Diintiisa, naynaastiisa, inuu ahaa goolhaye, in Aabihiis uu waardiye ka ahaa Xabsi & Waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn saxiixa cusub ee Kooxda Arsenal, Nicolas Pepe – Gool FM
Diintiisa, naynaastiisa, inuu ahaa goolhaye, in Aabihiis uu waardiye ka ahaa Xabsi & Waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn saxiixa cusub ee Kooxda Arsenal, Nicolas Pepe
Haaruun August 5, 2019
(London) 05 Agoosto 2019. Kooxda Arsenal ayaa saxiixa Nicolas Pepe ku dhawaaqday bilwogii bishaan, waxaana ay ka soo qaateen Lille oo ay ugala soo wareegeen adduun dhan 72 milyan oo gini.
Pepe ayaana noqday saxiixii ugu qaalisanaa oo ay Arsenal abid la soo wareegto iyo laacibkii Afrikaanka ahaa ee ugu qaalisanaa taariikhda.
Xiddigan xulka qaranka Ivory Coast oo 24-sano jir ah ayaa qalinka ugu duugay Arsenal heshiis shan sanadood ah oo garoonka Emirates ku sii hayn doona illaa 30 bisha Juun sanadka 2024-ka, waxaana loo dhiibay lambarka 19-aad.
Haddaba waxaan eegeynaa noloshii adkeyd ee uu ku soo koray diintiisa, naynaastiisa, inuu ahaa goolhaye, in aabihiis uu waardiye ka ahaa Xabsi, hooyadiisna ay ahayd Adeegto & wax waliba oo aad uga baahan tahay saxiixa cusub ee Kooxda Arsenal Nicolas Pepe ee ka daawo muuqaalka hoose.
Waxaa warbixintaan soo jeedinaya Haaruun Yuusuf Khasaaro.
Weeraryahanka Manchester United ee Romelu Lukaku oo tababar la qaatay koox kale
RASMI: Gary Cahill oo ku biiray koox cusub ee horyaalka Premier League ah